Pesaro — တစ်လနေဖြင့်ရာသီဥတုက, ရေအပူချိန်
ကမ္ဘာ့ဖလား Resorts နိုင်ငံများ အီတလီနိုင်ငံ Pesaro
Pesaro — Padova Pesaro — Olbia Pesaro — Monterosso Pesaro — Milano Pesaro — Massa Lubrense Pesaro — Pizzo Pesaro — Porto သြှ Pesaro — Pozza di Fassa Pesaro — Ragusa Pesaro — Riva del Garda
ပျမ်းမျှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — 29.5°C သြဂုတ်လတွင်. ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — 22.5°C သြဂုတ်လတွင်. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — 9.9°C ဇန်နဝါရီလထဲမှာ. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — 7°C ဖေဖော်ဝါရီလက.
ရေပျှမ်းမျှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ — 26.3°C သတ်မှတ်ထားတဲ့ သြဂုတ်လတွင်. ရေပျမ်းမျှအပူချိန်ကအနည်းဆုံး — 10.2°C သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက.
အမြင့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 74.4 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ဖေဖော်ဝါရီလက. နိမ့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 22 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် သြဂုတ်လတွင်.